Goolhayihii hore ee Real Madrid Iker Casillas oo ugu hambalyeeyay saaxiibkiis Ramos Rikoodhkii uu xalay sameeyay – Gool FM
(Madrid) 13 Okt 2019. Goolhayihii hore kooxda Real Madrid ee Iker Casillas ayaa fariin hambalyo ah u mariyay saaxiibkiis Sergio Ramos boggiisa rasmiga ah ee Twitter, kaddib markii uu jabiyay rikoorkii kaga diiwaan gashanaa xulka qaranka Spain ee ahaa xiddiga ugu safashada badan maaliyada La Roja.
Macalinka xulk qaranka Spain ee Robert Moreno ayaa u soo xushay Sergio Ramos inuu qeyb ka noqdo kulankii xalay ay Norway ku kala baxeen barbaro 1-1 ah, kaasoo ka tirsanaa Isreebreebka koobka Euro 2020-ka.
Sergio Ramos ayaa xalay ciyaaray kulankiisii 168-aad isagoo xiran maaliyada xulka qaranka Spain, wuxuuna rikoodhkan kaga sara maray Iker Casillas oo soo ciyaaray 167 kulan ee ah xulka La Roja.
Rikoodhkan uu gaaray xalay kabtanta kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa waxay ka dhigeysaa inuu noqday kan ugu safa shada badan xulka qaranka Spain tartamada oo dhan taariikhda.
Haddaba Iker Casillas ayaa boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka wuxuu ku soo qoray fariin uu ugu hambalyeenayay Sergio Ramos wuxuuna yiri:
“Hambalyo Sergio Ramos inaad gaartay kulankaadii 168-aad ee xulka Spain, waxaad noqotay midka ugu safashada badan ee xulka qarankeena”.
Sergio Ramos ayaa dhankiisa ka soo jawaab celiyay fariinta hambalyada ee kaga timid Iker Casillas wuxuuna boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka uu ku soo qoray:
“Waad mahadsan tahay Iker Casillas, sharaf ayey ii tahay inaan ka helo hambalyadan halyeey iyo saaxiib addiga oo kale ah”.